April 2, 2009 site na rịọ 5 Comments
Nke a version agbakwụnye a fix akwado MySQL 4.1. Ọ bụrụ na ndị gara aga version na-arụ ọrụ ezi n'ihi na ị dịghị mkpa iji kwalite.
Ga-amasị m na-ekele Gịnị na Julian maka enyemaka ha debugging a tricky nke.
March 31, 2009 site na rịọ 3 Comments
March 24, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Dị nnọọ ụbọchị abụọ mgbe 0.1.0 anyị kpebiri ịhapụ 0.1.1, ọ dịghị ihe isi na a tọhapụ – ma ekele ụfọdụ mara mma nzaghachi anyị nwetara, anyị na-enwe ike idozi ụfọdụ nsogbu na ngwa ngwa
Dị ka mgbe niile – na ị na-nabata ka ibudata ya na-anwale ya na gị na saịtị.
ma na-echeta! we are here to help 😉
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ
March 22, 2009 site na rịọ 1 Ikwu
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: tọhapụ
Ụfọdụ ọhụrụ atụmatụ ke 0.0.3
March 7, 2009 site na rịọ 3 Comments
Taa, anyị hapụ ọhụrụ version na na-agbakwụnye, support abụọ atụmatụ. Onye mbụ bụ nwere ikike inwe sụgharịrị RSS faili ntanetịime, niile o kwesịrị ime bụ idenye aha na ndepụta ahụ a sụgharịrị ịbụ na peeji nke.
Nke abụọ mma bụ mma ka translation interface nke na-enye ohere onye nsụgharị na a tụrụ aro site na kọmputa ngwaọrụ (ugbu a na-arụ ọrụ na google ntụgharị) ma jiri ya dị ka onye inyeaka nke edikabade.
Anyị ka na-ata na-emeghe gị aro, dị nnọọ ịkpọtụrụ anyị.
Mmelite – 08/03 – Onye ọ bụla ná nsogbu nwụnye, ruo mgbe anyị hapụ ọzọ version, biko wụnye version 0.0.2 na mbụ ka kwalite na 0.0.3
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Software mmelite Akpado Na: google ntụgharị, tọhapụ, RSS